कागज हवाइजहाज - Ikkaro
बारेमा कुरा गर्न सेक्सन कागज विमानहरू। निर्माण, उडान फाराम, लिंक, योजनाहरू, आदि।
हामी थोरै भएको हुनाले उनीहरूले हाम्रो ध्यान खिचे। हामी कागजको पाना लिन्छौं जुन हामी यसलाई आफ्नो हातहरूसँग बनाउँछौं र अचानक त्यो हवाईजहाज बन्यो र उडान पनि! एक बच्चा चकित पार्न ओगिगामीमा त्यहाँ अधिक व्यावहारिक र प्रभावकारी केहि छैन।
हामीले क्लासिक मोडलहरूमार्फत शुरू गरेका थियौं, जुन हामी सबैलाई कसरी बनाउने र चाँडै हामी अझ बढी चाहान्छौं भन्ने कुरा जान्दछौं, र हामीले विभिन्न प्रकारका कागज हवाईजहाजहरू खोज्न थाल्छौं जुन सब भन्दा धेरै उडानहरू हुन्छन्, ती छिटो बनाउने, आदि। , आदि
र यो खण्डमा म यी सबै प्लेनहरूको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु, जुनबाट एक उत्तम उड्छ, उत्तम ग्लाइडरमा। कसरी एरिपेनाहरू चरणबद्ध रूपमा बनाउने र अन्य रोचक प्रश्नहरू ओरिगामीको विश्व र कागजको हवाई जहाज मोडेलहरूको सिर्जनासँग सम्बन्धित। के तपाईंलाई थाहा छ त्यहाँ हवाई जहाज सिमुलेटरहरू छन्? उडानको समयको बारेमा के हुन्छ? त्यहाँ के मेशिनहरू छन् जुन आफैले हवाईजहाज बनाउँछन् र ती सुरू गर्छन्? के तपाईं आफ्नै कागज हवाइजहाज प्रक्षेपण निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ?
ठिक छ, म के गरिरहेको छु। कुनै विचार तपाईसंग छ सधैं स्वागत छ।
म तपाईंलाई कसरी पेपर एयरप्लेनहरू बनाउने बारेमा ट्यूटोरियलको साथ छोड्दछु। र यदि तपाईं एक ओरिगामी प्रेमी रूप हुनुहुन्छ हाम्रो खण्ड
कागज हवाइजहाजको साथ विश्व रेकर्ड
हामी यस वर्ष कागज हवाइजहाजको साथ विश्व रेकर्डको साथ दुई भिडियोहरू छोड्दछौं।
एकातिर हामीसँग सब भन्दा लामो उडान छ, २.27,9..XNUMX सेकेन्डको साथ।
र अर्को तर्फ, एउटा जिज्ञासु प्रतियोगिता जुन मैले पहिले कहिल्यै देखेको थिइन। उडान कागजको विमानहरूको वर्ल्ड रेकर्ड एक घनका लागि बाध्य छ। साँच्चिकै उत्सुक, मलाई थाहा छैन के तपाईंले कुन घन राख्नुपर्नेछ यदि तपाईंले अभ्यास गर्न र आफ्नो परिचय दिन चाहानुहुन्छ, तर म जाँचबुझ गर्नेछु।
क्युबको बारेमा साँच्चिकै उत्सुक, मैले यो हेेहें
यी सबै हामीले देख्यौं Oriplane
DC-03 विश्व मा सबै भन्दा राम्रो कागज ग्लाइडर
हामी प्रस्तुत गर्दछौं कागज विमान DC-03 विचार गरे विश्व मा सबै भन्दा राम्रो कागज विमान.
तर निस्सन्देह, सबै भन्दा राम्रो, खराब वा राम्रो सापेक्ष रूपमा, यो हामीले पछ्याएको उद्देश्यमा निर्भर गर्दछ, म भन्न चाहन्छु कि यो छ संसारमा सबै भन्दा राम्रो कागज ग्लाइडर। ठिक छ, यस क्षेत्रमा यो लाग्छ कि यसको कुनै प्रतिद्वन्द्वी छैन।